Donald Trump na-ekwu maka Apple na mgbako | Esi m mac
Esemokwu Donald Trump ga-amanye Apple ka ọ rụpụta ngwa ya n'ime United States
Onye ndoro-ndoro ochichi nke USA, Donald Trump, nyere n’oge na-adịbeghị anya a rally na Virginia Liberty University n'oge nke a o kwuru okwu banyere ụdịrị ụdị okwu ndọrọ ndọrọ ọchịchị ọ dịlarị dịka mbata na ọpụpụ na echiche ya karịa echiche mgbanwe. Otú ọ dị, n'oge a, Trump kwukwara banyere Apple n'okwu ya mgbe ọ na-ekwu maka otu esi eweghachite ọrụ na United States mgbe a bịara n'ihe ndị a rụpụtara, na-achụpụ ụlọ ọrụ na mba ndị dịka China.
N'okwu nde na onye ndoro-ndoro ochichi, "anyi aghaghi ime ka ha wuru akuru ahihia ha na ngwa ndi ozo n'ime obodo a" obu ezie na ihe mbu anyi abughi ihe ojoo ike ọrụ na iji megharịa mpaghara ahụ n'ime mba ahụ, enyeghị nkọwa banyere otu ọ ga - esi kwenye ma ọ bụ manye Apple na ụlọ ọrụ ndị ọzọ ka ha weta ụlọ ọrụ ha na United States, ọ bụ ezie na n'ezie na ọ bụ site na iwu akwadoro ma ọ bụ mgbanwe mgbanwe ụtụ mara mma karị maka ụdị ụlọ ọrụ ndị a.
Ọ gara n'ihu na-ekwu okwu ya banyere ndị niile ahụ ndị dị ịtụnanya ndị na-arụ ọrụ na mba ahụ:
"Ha dị nkọ, sie ike, dị ike, na nkenke, ha dị ịtụnanya." “Anọ m na-eche ihe ga-eme ka America dị ukwuu ọzọ, echekwara m n’eziokwu na anyị nwere ike ikwu, m na-emekwa ya, na anyị ga-enweta ya… anyị ga-akpọta Apple ebe a ka ha bido iwube ngwa na ngwa ha. na mba a, kama na mba ndị ọzọ «.
Dịka m kwuru na mbụ, enweghị iwu iwu dị ugbu a iji weta nrụpụta ngwaọrụ niile dị na United States ma ọ bụrụ na a họpụtara Trump n'ikpeazụ ịbụ onye isi ala, n'agbanyeghị na enwere ike ịkwalite na ụtụ isi. Mana onye isi ụlọ ọrụ ahụ, Tim Cook, ekwuola okwu na mmemme «60 Nkeji» na ihe mere ha arụpụtara ngwaahịa ha na China ma rụtụ aka na Ọrụ ndị ọrụ China na isi ike nke ụlọ ọrụ ndị nọ ebe ahụ, iji mepụta ma mee ka ihe niile gaa nke ọma. N'adịghị ka na United States, bụ ebe elegharala nkà ndị dị mkpa anya na gburugburu ebe ọrụ ọkachamara a, n'azụ China.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » Noticias » Esemokwu Donald Trump ga-amanye Apple ka ọ rụpụta ngwa ya n'ime United States
Ndị injinia ndị ọzọ na-arụ ọrụ na ihe mmetụta Apple Watch